Shina YF-H-203-2 dia manandratra ny mpamokatra sy mpamatsy sidetable multifunction ambony | Yifan
tsy misy YF-H-203-2
TOETOETRA Fitehirizana, vatasarihana, vera fandrehitra
DIMENSION TABLE 400mmL x 400mmW x 500mmH
Ny latabatra misy multifunctional misy endrika tsotra sy lamaody tsotra, azo diovina mora foana ny ambonin-malama. Ireo mpandefa swivel dia manome ity latabatra am-pandriana ity ho fitoniana maharitra ary mamela ny latabatra hifindra mora foana. Azo ampiasaina ho latabatra alina, latabatra solosaina finday sofa, latabatra fandalinana, fanoratana, tabilao ary latabatra famakiana ihany koa
Ny famolavolana tsotra sy lamaody tsotra, ny faritra malama dia azo diovina mora foana.
Ny vatasarihana 3 dia azo esorina amin'ny lafiny roa, ao anatin'izany ny vatasarihana 1 ho an'ny boaty kleenex mahazatra sy swivels 360 degre ary tontonana laptop azo ahodina, 2 fitahirizana talantalana misokatra. Tena azo ampiharina.
Multifunction: Izy io dia azo ampiasaina amin'ny takelaka am-pandriana, kabinetra fandriana, latabatra konsoly sns. Miaraka amin'ny endrika manintona sy fiasa mahomby Ny talantalana ambony dia manome toerana hametrahana solosaina finday, boky, magazine, kafe, voankazo, tsakitsaky, sakafo, na zavatra hafa. Ny endrika Z tsara tarehy dia famenon-javatra tsara amin'ny sofa, seza ary fandriana ho latabatra mora ampiasaina ho an'ireo entanao matetika miditra. Ary koa, ny latabatra amin'ny lafiny dia safidy tsara ho an'ny olona mipetraka amin'ny toerana kely na trano fatoriana, izay hanampy anao hampiasa feno ny efitrano. Ity tompona solosaina finday ity dia afaka mamaly ny filan'ny fianakaviana isan'andro.
Endri-javatra: 1.Ny latabatra ambony dia mety ho maimaim-poana sy 360 ° mihodina ary mitongilana. Ny fisakanana an-tsisiny dia manakana ny zavatra tsy hianjera.2. Ny vatasarihana roa dia manome tahiry miafina.
Mora ny mandeha: Ny famolavolana kodiarana, ny kodiarana efatra ary ny roa amin'izy ireo dia azo hidin-trano, ahafahanao mivezivezy amin'ny toerana tianao, ary manidy azy ho mafy orina.
Fonosana amin'ny fiteny 24 (anglisy, frantsay, espaniola, alemanina, italianina, portogey, holandey, poloney, hongroà, romainina, danoà, soedoà, finnish, litoanianina, norvezianina, slovenianina, grika, Czech, Bulgarian, kroaty, Slovakia, estonianina, rosiana Letôna
Raha manana fanontaniana momba ny fividiananao ianao na amin'ny vokatra hafa amidy, dia afaka manampy ny solontenan'ny serivisy mpanjifa.
Previous: Hoditra YF-H-203-1 Tabilao roa malalaka
Manaraka: YF-H-204 Volomparasy fotsy mamita ny latabatra amin'ny endriny farany amin'ny jiro miaraka amin'ny vatasarihana
Latabatra voaforona am-pandriana
Latabatra am-pandriana miaraka amin'ny ranjo varahina
Latabatra fandriana lamba
Latabatra amoron-tsambo mitsingevana
Latabatra fandriana Nordic
Tabilaon'ny fandriana tsara
Latabatra lafiny tsara
Latabatra fandriana lamba volon'ondry
Latabatra eo anilan'ny YF-H-206 miaraka amina vatasarihana famaranana azy ...
YF-H-201 Fonosin'ny latabatra an-trano fotsy fotsy
YF-H-202 Fampifangaroana takelaka am-pandriana
YF-H-210 Fotsy fotsy sy volamena maoderina 3 Draw ...
Hoditra YF-H-203-1 Tabilao roa malalaka